tootle(tootle) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
आजबाट टुटल र पठाओको पनि सेवा सुचारु
काठमाण्डौ । राइड सेयरिङ टुटल र पठाओको सेवा पनि आजबाट सुचारु भएको छ। उपत्यकामा आजबाट जोर–बिजोर प्रणालीमा भाडाका ट्याक्सीसँगै निजी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न खुला गरिएसँगै टुटल र पठाओले पनि आफ्नो सेवा सुचारु गरेको हो। कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि उपत्यकामा गत वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै यी दुवै कम्पनीका...
उपत्यकामा आजबाट टुटल र पठाओले यात्रु ओसार्न थाले
काठमाण्डौ । निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै उपत्यकामा टुटल र पठाओले पनि सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छन्। उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएर जोरबिजोरका आधारमा निजी सवारीसाधन चल्न दिएसँगै यी दुवै राइड सेयरिङ कम्पनीहरुले आफ्नो सेवा सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। पठाओमा आबद्ध मोटरसाइकल र ट्याक्सीले आफ्नो सेवा सुरु गरेका छन्। जोरबिजोरअनुसार नै...
टुटल र पठाओलाई भाडामा यात्रु ओसार्ने काम तत्काल रोक्न निर्देशन
काठमाण्डौ। टुटल र पठाओलाई लक्षित गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले अन्य प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनले भाडा लिएर यात्रु बोक्न नपाउने व्यवस्था रहेको पुनः अवगत गराएको छ। विभागले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै यदि कानुन उल्लंघन गरी अन्य प्रयोजनाका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनले भाडामा यात्रु बोकेको पाइएमा कारबाही हुने चेतावनी पनि दिएको...
सरकारद्वारा निजी सवारीमा भाडा लिएर यात्रु ओसार्न रोक, टुटल र पठाओको भविष्य के ?
काठमाण्डौ । सरकारले निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारीसाधनलाई भाडा लिएर यात्रु बोके कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले बुधबार एक सूचना गरी त्यस्तो गरेको पाइए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । यो सूचनासँगै निकै प्रचलनमा रहेको टुटल, पठाओलगायतका सेवाको भविष्य अन्योलमा पर्ने भएको छ । यी दुवै अनलाइन...
टुटल र पठाओको सेवा बन्द गर्ने यातायात विभागको तयारी !
काठमाण्डौ । सवारी ऐनभन्दा बाहिर गएर व्यवसाय संचालन गरेको भन्दै सरकारले टुटल र पठाओको सेवा बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागमा हालै महानिर्देशक भएर गएका कुमारप्रसाद दाहालले ऐन भन्दा बाहिर गएर कसैले पनि काम गर्न नपाउने भन्दै टुटल र पठाओले काम गर्न नपाउने प्रष्ट पारेका हुन् । टुटल र पठाओले एपमार्फत् बाइक सेयरिङ सेवा...
सामलिङ्ग पावरको माइबेनी जलविद्युत आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु
प्राविधिक रुपमा ‘एसकेबीबीएल’ को सेयर बजारमा आगामी यात्रा सुखद् रहने संकेत
ब्याज भुक्तानीका लागि आरटीजीएस प्रणाली भोलि शनिबार पनि खुला रहने